people Nepal » आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ १२ गते सोमबार आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ १२ गते सोमबार – people Nepal
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ १२ गते सोमबार
Posted on June 26, 2017 by Durga Panta
आज श्री शाके १९३९, वि.सं. २०७४ साल आषाढ १२ गते सोमबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ जुन २६ तारीख, आषाढ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथी २६:१५ बजे सम्म चन्दमा कर्कट राशिमा सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु
नयाँ कार्य थालनि गर्ने अबसरहरु प्राप्त हुनेछन । कार्यसम्पादनको लगनसिलताका कारण मान सम्मान प्राप्तीको योग रहेको छ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने छ । पारीवारिक मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । प्रिय मित्रजनहरु बिचको भेटघाट ले मन प्रशन्न रहला ।
सम्पुर्ण प्रतिस्पर्धि बिचमा आफु अबल रहिनेछ । शुभचिन्तक हरुको साथ सहयोग द्वारा कार्य सम्पादनमा सहज हुनेछ । रोकिएका रहेका कामहरु बन्नेछ । कष्टकर यात्राका कारण स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य खराबि उत्पन्न हुन सक्नेछ । मित्र हरुको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
बोलि तथा खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । सामान्य चोट पटक आईपर्नेछ । खराब संगतका कारण सामान्य समस्या आइपर्न सक्नेछ । समयको सहि सदुपयोग गर्न नसक्नाले कार्य क्षेत्रमा साधारण ढिलाई भोग्नु पर्नेछ ।
मानसीक तनाबका कारणले गर्दा कार्य क्षेत्रमा झन्झट आई पर्न सक्नेछ । पारीवारिक भेटघाटको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । दाम्पत्य सम्बन्धमा भने खटपट रहला । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउनेछ । आय आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन ।
फजुल खर्चको योग रहेको छ । मानसिक चिन्ताले सताउनेछ । आँट शाहसमा कमि आउनाले कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । अधुरो यात्रा रहने योग रहेकोछ । अरुको छिटो बिश्वास गर्नाले सामान्य धोकामा परिएला । नयाँ कार्यको थालनि नगनू होला ।
आम्दानिका बिभिन्न स्रोत हरु फेला पर्ने छन । दिदी बहिनीहरुको साथ सहयोगले दीगो फाईदा हुने कार्यको थालनि होला । आक्स्मिक धनलाभको सम्भाबना रहेको छ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउला ।
मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ । श्रम र मेहेनतको राम्रो कदर हुनेछ तथा मानसम्मान प्राप्त हुने समय रहेको छ । सन्तान शुख प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थी बर्गको बौधिक बिकाशका निम्ति समय राम्रो रहेको छ । दिन उतम रहने छ ।
धार्मिक कार्यको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । बिशेष जिम्मेबारी बहन गनुपर्ने समय रहेको छ । ईष्ट मित्रजनको सहयोग प्राप्तहुनाले कार्य सहज रहला । मान्यजनको मार्गदर्शन अबलम्बन गर्नाले भाग्योदयको बाटो देखा पर्नेछ । आजको कार्यले भोलिलाई फाइदा रहनेछ
चिसो सम्बन्धि समस्याले स्वास्थमा सामान्य बाधा आईपर्ने छ । मानसीक चन्चलताले कार्य क्षेत्रमाझन्झट आई पर्नेछ । सामान्य बादबिवादको सामना गर्नु पर्ला । मनमा उत्पन्न बिभिन्न कुबिचारले समस्या निम्त्याउन सक्ला सजग रहनु पर्नेछ । समय त्यति राम्रो छैन् ।
ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ । बिश्वासिलो ब्यक्तिहरुबाट धोका हुन सक्ला । तपाईको कार्य बाट फाईदा लिनेहरुको सङख्यामा बृद्यि हुनेछ । नया कार्य थालनि गर्ने अबसरहरु प्राप्त हुनेछन । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनछ ।
मनमा चन्चलताले बास गर्नेछ । कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पधिहरुको बृद्यिहुनाले तपाईलाई सामान्य झन्झट आईपर्ला निर्णय गर्न नसक्नाले आफ्नो कमजोरी महसुस हुनेछ । अरुको संगतगर्ने बानिले सामान्य समस्या आइपर्ला । कसैको बिश्वास नगरेकै बेश हुनेछ ।
बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । सन्तान शुख प्राप्त हुनेछ । आम्दानिका बिभिन्न स्रोत हरु फेला पर्ने छन । पठनपाठनको निम्ति समय राम्रो रहेको छ । गरिरहेको कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले अरु नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ ।